China Nitrogen Protection Jet Mill System Ho an'ny orinasa sy mpanamboatra fitaovana manokana | Qiangdi
Rafitra fanodinana fiaramanidina fiarovana nitroka – Izy io dia rafitra Nitrogen toy ny haino aman-jery, eo ambanin'ny tsindry tsara, mamarana ny fizotran'ny vokatra manokana toy ny fitaovana mora mirehitra, mipoaka, mora voapoizina ary mora hygroscopic .amin'izany dia mahatratra vovoka hafa.
Ny rafitra fiarovan'ny fiaramanidina fiarovana Nitrogen dia mampiasa ny gazy Nitrogen ho fampitam-baovao amin'ny pnneumatika fitrandrahana mba hanatanterahana ny fizotran'ny maina maina. Ny rafitry ny mill jet dia misy compressor, tanky fitehirizana rivotra, tanky fitehirizana fitaovana, jet mill, cyclone Separator, mpanangona ary mpanaraha-maso mandeha ho azy. Rehefa miasa ny rafitra, ny entona azota dia havoaka ao amin'ilay rafitra handroahana ny rivotra mandra-pahatongan'ny rafitra iray manontolo mahatratra ny sanda isa napetraky ny detector oxygen. Avy eo ny rafitra atombohy ho azy ny fitaovana famahanana ara-nofo mba hanomezana sakafo ara-dalàna ireo fitaovana ny efitranon'ny fikosoham-bary. Ny entona azotaona voadidy dia atsindrona ao amin'ny a haingam-pandeha mankany amin'ny efitrano fikosoham-bary amin'ny alàlan'ny nozôzy ultrasonic manokana. Noho izany, ny fitaovana dia hofongorina amin'ny alàlan'ny fanafainganana, ny fiatraikany ary nifandona imbetsaka teo afovoan'ny fikorianan'ny tsindrona ultrasonic. Ireo fitaovan'ny tany dia hoentina miaraka amin'ny fiakarana ho any amin'ny efitrano fanaovana grady. Tsy afaka miditra amin'ny kodiarana fitetezana izy ireo ary averina ao anaty efitrano fikosoham-bary indray. Ny voamaina manify dia hiditra amin'ny kodiarana grady ary hopaoka amin'ny Separator Separator sy collector raha ny entona azota kosa hiverina amin'ny compressor, amin'ny alalàn'ny hametrahana azy io hamerenana amin'ny laoniny.
1. Mety amin'ny famolavolana fitaovana mora mirehitra, mipoaka, mora voapoizina ary hygroscopic.
2.Operation ny masinina dia fehezin'ny fakan-tsarimihetsika mandroso sy PLC ho an'ny fifehezana automatique, mora ny mifehy ny atin'ny oxygen.
3.Nitrogen dia voaodina amin'ny fanjifàna tena ambany. Ny fifehezana ny fahadiovan'ny nitroka dia avo kokoa noho ny 99%.
4.Araka ny fananana ara-materialy, azonao atao ny misafidy ny hampiasa mill mill na pulverizer mekanika tena tsara.
5. Izy io dia be mpampiasa amin'ny Sulfur, Cobalt, nikela, boron oxide ary hygroscopic cosmetics sns.
6. Rafitra fanaraha-maso milanja, avo lenta, tsy voatery, fahamarinan-toerana avo.
Famolavolana porofo mipoaka ho an'ny rafitra fivezivezena azota hamenoana ny fitakiana fikolokoloana tena tsara amin'ny fitaovana oksida mora mirehitra sy mipoaka.
Torohevitry ny rafitra fiarovana ny fitrandrahana nitroka
Ny tabilao mikoriana dia ny fanodinana fanodinana fanao mahazatra ary azo ahitsy ho an'ny mpanjifa. Misy fizarana telo ho an'ny rafitra iray manontolo: rafitra fanamboarana nitroka, rafitra famatrarana Nitrogen, rafitra fitotoana mihidy.
Application santionany amin'ny sehatra samihafa
Ampiharina amin'ny fanafody (mpanjifa sinoa)
Ampiharina amin'ny solifara
DBF-400 Miaraka amin'ny fametahana keramika sy PU .tamin'ny hamafiny avo lenta ary ampiasaina amin'ny indostrian'ny bateria, Ankoatr'izay dia fitaovana hygroscopic izy io, Ka mampiasa NPS amin'ny fikolokoloana ity fitaovana ity.
Hongkong chemicle factory, Poly-Si vovoka fikosohana ho an'ny bateria, Andiam-pandrefesana DBF-400 Nitrogen fiarovana tsipika famokarana Jet, fahafahan'ny famokarana 200kg / h, haben'ny potika D90: 15μm
◆ Ny vokatray dia manana tsena tsara eran'i Shina iray manontolo,
Na inona na inona eo amin'ny sehatry ny pharmaceutika, Agrochemical, New Material, Battery & Electron, Coating & Pigments.
◆ Manondrana ny vokatra any amin'izao tontolo izao izahay: Amerika, Aostralia, Afrika ary Azia atsimo atsinanana ary ireo firenena afovoany atsinanana, toa an'i Pakistan, Korea, Vietnam, India, Burma, Kambodza, Indonezia, Malezia, Singapore, Japan, Thailand, Egypt, Ukraine, Russia , sns. Amin'ny sehatry ny fambolena indrindra.
Teo aloha: Indostrian'ny bateria sy fitaovana simika hafa ampiasaina amin'ny mill-bed am-pandriana
Manaraka: Jet Micron Grader Ho an'ny Sorting